Ama-Superfoods okufanele uwafake ekudleni kwakho | Bezzia
Ama-Superfoods okufanele uwafake ekudleni kwakho
UToñy Torres | 14/09/2021 20:00 | Amathiphu ezempilo
Uma kukhulunywa ngokudla okunomsoco nokudla, awusoze wathi konke kubhaliwe. Ngoba, ngenhlanhla, nsuku zonke ucwaningo olusha nezifundo ezihlobene nokudla futhi ukuthi lokhu kusithinta kanjani ngaphakathi. Kuyafakazelwa ukuthi konke okufakiwe kuthinta ngandlela thile. Futhi ngendlela efanayo okunye ukudla okuyingozi ngayo empilweni, okunye kuyayithanda kakhulu.
Okunye ukudla kuqukethe izinto nezakhamzimba ezisiza ukuqinisa amasosha omzimba. Yini ebalulekile ukuvikelwa kuma-virus, amabhaktheriya nazo zonke izinhlobo zezifo. Lokhu kudla kubizwa nge- "superfoods" futhi kukufaka ekudleni njalo, ingakusiza ube nempilo enhle, uqine futhi uvikeleke ngaphakathi.
1 Yini ama-superfoods
2 Ama-superfoods okufanele abe ekudleni kwakho
2.1 Amajikijolo e-Acai
2.2 Imbewu yeChia
2.3 Itiye likaMatcha
Yize sebenemfashini iminyaka ethile manje, ama-superfoods akuyona into entsha. Kungaphezulu, ukudla okuvele kuyingxenye yokudla kwethu kwaseMedithera, njengamafutha omnqumo. Kodwa-ke, ukuthi okuningi kwalokho okwaziwa ngokuthi yi-superfood kuyimbewu, amajikijolo kanye nokudla okungajwayelekile, yikho okubenza bakhethe futhi baxakeke kubantu abaningi.
Igama elithi superfood alinaso isisekelo sesayensi ngokwalo, kepha liyamukelwa ngoba incazelo yalo ingokoqobo ngokuya ngezakhi zokudla okunempilo kokudla okuwela kulolu hlu olunelungelo. Njengoba ama-superfoods angukudla nge inani eliphezulu lokudla okunika izinzuzo ezinkulu zezempilo, njengama-antioxidants, amavithamini, noma amafutha anempilo.
Ama-superfoods okufanele abe ekudleni kwakho
Uhlu lwama-superfoods luya ngokuya lubanzi, ngoba luyimikhiqizo evela ekulimeni okuphilayo ngokwezinga elikhulu futhi izinkampani eziningi ngokwengeziwe zikhuthaza ukudla okungokwemvelo nokunempilo kakhulu. Manje, kufanele kukhunjulwe ukuthi ukudla kukodwa akunamandla okuthuthukisa impilo. Ukudla okunempilo kufanele kulinganiswe, ahlukahlukene futhi alinganiselwe. Uma ufaka lawa ma-superfoods, umzimba wakho uzozuza kuzo zonke izakhiwo.
Lesi sithelo esifana ne-blueberry singesinye sezinzuzo kakhulu kwezempilo ngenxa yokuqukethwe kwayo okuphezulu kwama-antioxidants. Futhi, ama-açaí amajikijolo ayi ucebile ku-omega 3, 6 no-9 fatty acids, i-amino acid ebalulekile ebaluleke kakhulu empilweni. Phakathi kwezakhiwo zayo eziningi zezempilo, amajikijolo e-açaí alungele ukuqinisa amasosha omzimba, ukulwa nezifo ezinjengomdlavuza futhi, bathi, kwezempilo yezocansi.
Mhlawumbe okunye kokudla okupheka kakhulu okwaziwa kakhulu kusukela eminyakeni ethile imbewu ye-chia iya ngokuya ikhona emakhishini abo bonke abafuna ukuthuthukisa impilo. Iyimbewu egcwele izakhiwo ezizuzisa kakhulu, phakathi kwazo, icebile ngama-acids anamafutha abalulekile, i-calcium, i-magnesium nokuqukethwe kwe-fiber ephezulu. Lezi zinhlamvu zikhona ilungele i- ukuhamba kwamathumbu, inhliziyo, isifo sikashukela noma i-cholesterol, phakathi kwabanye.
Lokhu kudla okuphezulu kungabhekwa njengokubalulekile, ngoba ngenxa yezakhiwo zayo eziningi kungenye yezinzuzo zempilo. Itiye leMatcha alilutho ngaphandle kohlobo lwetiye eliluhlaza elihlanganiswe namanzi, okungukuthi, lonke iqabunga liyadliwa hhayi ukumenyezelwa nje, okunezela izakhiwo. I-antioxidant enamandla evimbela ukuguga kwamaselula, phakathi kwezinye izinzuzo eziningi zezempilo.
Lesi sinongo esivela empandeni yomndeni we-ginger, sithathwa njenge-anti-inflammatory yemvelo. Kuhle ngenhliziyo, kunjalo elwa nokuvuvukala, i-antioxidant futhi enhle ekuvikeleni nasekwelapheni izinhlobo ezithile zomdlavuza.
Lokhu okunye kokudla okuphezulu okubaluleke kakhulu okwaziwayo, yize kungebona bodwa. Yize kubaluleke kakhulu lokhu kudla kuhlanganiswe ekudleni ngendlela elinganiselayo. Njengoba kungaleso sikhathi kuphela lapho zonke izakhiwo zayo nezinzuzo zezempilo zingagcwaliseka. Ngoba kubaluleke kakhulu ukukhumbula lokho izinsika zempilo enempilo kungukudla, ukuzivocavoca kanye nemikhuba enempilo.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Amathiphu ezempilo » Ama-Superfoods okufanele uwafake ekudleni kwakho
Kuyini okuhle ngezocansi
Ukuzivocavoca nokunwebeka kwentamo